Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo m2ts in mpeg?
Qeybta 2: 2 sababaha diinta m2ts in mpeg
Qeybta 3: Sida loo Beddelaan M2TS in MPEG fudud oo degdeg ah oo ku saabsan Windows / Mac OS
Qeybta 4: Ogow & Gunaanad
Mpeg waa qaab ah in uu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah oo ka badan qaab m2ts. Warqada foomka ah, Deji iyo heerka riixo guud ahaan waa waqtiga dhabta ah si ay heerka diinta sidoo kale waa ka dhaqso arrintan la xiriira. User wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka arrintan la xiriira oo dhan waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in user awood u yeelan doonaan in la hubiyo in meel bannaan oo ma aha oo kaliya in ka yar waa la wada baabbi'iyey, laakiin natiijada kama dambaysta ah waa wax aan lahayn saameyn ku saabsan tayada iyo sidoo kale isku halaynta video ee arrintan la xiriira.
Si aad uga jawaabtid su'aashan aynu bilaabi ka xaqiiqda ah in ay jiraan sababo dhowr ah si loo hubiyo in qaabab waxaa isku jireen ama loo beddelo oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Marka ay timaado in sababta ugu weyn ee markaas baaxadda, shaqo ee bannaan iyo Nuur iyagoo qaar ka mid ah sababaha taas oo labada qaabab in la hoos jira bedelay inter. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in soo socda laba sababood waxaa mar kasta loo tixgeliyo by user ee arrintan la xiriira si nidaamka aan noqdo fudud in ay raacaan oo kaliya laakiin waxa ay sidoo kale uu noqonayaa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee jeer oo dhan. Sababaha in la halkan ku xusan lahaa ayaa sidoo kale hubin doona in ugu fiican ayaa u dhiibay markii waynay iyo-oolnimada hawlgalo oo ay sidoo kale ka wada hadlay si faahfaahsan si user heli karo wax soo saarka ugu fiican ee wax waqti ah gudahood oo dhan:
Heerka riixo ee mpeg waa ka dhakhso badan qaabka m2ts iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in riixo waqtiga dhabta ah waxaa sidoo kale ay taageerayaan qaab taas oo ah mid ka mid ah tayada ugu fiican ee qaab this. Waxay ka dhigaysa hubiyo in meel bannaan oo ku yar waxaa wada baabbi'iyey oo qaab laftiisa aadayso disk sida ugu dhakhsaha badan sidii loo abuuray. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in ka badan videos aadna ku badbaaddeen gudahood isku dhererka mid video ah qaab m2ts qaadataa.
Gunnada mooshin macluumaadka aan loo baahnayn oo dhan. In erayada fudud jir ah in interpolation jir waligeedna taas oo keliya ma gubtay, xogta yar laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa in convertor iyo sidoo kale processor ee mishiinka gubtay, tamarta yar ee arrintan la xiriira. Si aad u hesho sida ugu fiican ee arrintan la xiriira waxa ay sidoo kale waa in la ogaadaa in convertor in la isticmaalo ayaa sidoo kale door muhiim ah. Haddii convertor ku muujinayaa sare MPEG ratio riixo markaas tayada video uu noqon doono saboolka ah ee arrintan la xiriira.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa convertor ugu fiican in hubiyaa in dhamaan tayooyinka in lagu soo sheegnay qaybta ugu horeysay ee aan gundhig oo keliya, laakiin waxaa sidoo kale la tixgeliyaa in arrintan la xiriira. Wondershare Waxaa loo yaqaan adduunka oo dhan ah ee lagu sameynayo horumarka laga cabsado iyo farsamada in ay yihiin kuwa ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in convertor ayaa la qiimeeyo sida fiican ee ay ay users iyo ratings ayaa sidoo kale waxaa laga daawan karaa website-ka rasmiga ah ee shirkadda. Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira ayaa la soo sheegnay hoos ku qoran:
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in bogga rasmiga ah ee wax soo saarka ee URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html leeyahay in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi, rakiban iyo bilaabay in ay bilaabaan:
2. button Files Add markaas waa in la sii adkeeyey in lagu daro video ah in uu yahay in la bedelo,
3. Qaabka markaas waa in la bedelo ka guddi saxda ah si ay u hubiyaan in qaab ku habboon la doorto:
4. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button diinta la sii adkeeyey si loo hubiyo in hab-socodka ah ee diinta ku bilaabataa:
Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, waxaa sidoo kale kula taliyay in ay dhex maraan eraygan tutorial eray si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa oo waxgarashada qaab MPEG waxaa sidoo kale gaadhin hab ah in uu yahay aqoon u leh. Ayaa qaab Mpeg waxaa taageera inta badan dhufto ee adduunka oo dhan iyo ciyaaraha ee files kuwan ma aha oo kaliya, laakiin ciyaartoyda in la soo saaray arrintan la xiriira sidoo kale loo hubiyo in marnaba helo user gaadhay arrinta oo loo maqli karo ee waa u fududahay oo siman. Si aad u hubiso in qaab mpeg ah waxaa loo baddalaa waxaa sidoo kale looga baahan yahay user si aad u hesho ka convertors in ay yihiin isku halayn karo iyo sidoo kale gobolka of farshaxanka.
Waxaa jira tobanaan kun oo convertors online oo ku Daynanaa Iyagoo doorashada kasta oo iyaga ka mid ah waxay keeni doontaa in natiijada aan ku fiican yihiin oo dhan iyo natiijada kama dambaysta ah waxaa sidoo kale soo dhibtay qaab tayo leh oo jaango'an. Si aad u hesho natiijooyinka in ay yihiin gobolka of farshaxanka waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in convertor in loo doortay bixisaa taageero forum oo aad muhiim u ah. Taageero Forum waa nooc ka mid ah maalgelinta dadkii badnaa meesha user u baahan yahay si loo hubiyo in su'aashu waxay tahay posted iyo khubaro ka mid ah barnaamij gaar ah ka soo adduunka oo dhan ee ku boodaan si loo hubiyo in su'aashu waxay tahay oo kaliya uma uu jawaabin laakiin user ku dhajinta su'aasha ah Sidoo kale waa ku qanacsanahay in dhinac kasta. Taageero la mid ah ayaa sidoo kale ay ka bixisay dhufto ee ugu waaweyn ee ka soo adduunka oo dhan iyo sabab la mid ah waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in arrinta la xalin sida ugu dhaqsaha badan. User waa in sidoo kale la hubiyo in ay isku halaynta iyo waayo-aragnimo guud ee convertor waa dhabayseen iyo tutorial this hal ciyaaryahan oo kale ah ayaa sidoo kale la soo bandhigi doonaa si loo hubiyo in user helo heshiis fiican ee ay miisaaniyadda gudaha iyo ciyaaryahanka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay kaliya hal mar nolosha. Qiimaha bilowga ah ayaa sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in taageerada uu nool yahay waa la damaanad qaaday iyo inta uu soo qaatay by user helo qiimaha buuxa wax waqti ah gudahood oo dhan.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan M2TS in MPEG on Windows / Mac OS